अनलाइनखबरको ‘आलु समाचार’ – Media Kurakani
अनलाइनखबरको ‘आलु समाचार’
November 25th, 2015 Media Kurakani Media Watch
यो सामग्रीको हेडलाइन हामीले लेखेका होइनौँ, चर्चित समाचार पोर्टल अनलाइनखबरका पाठकले एउटा समाचारमा यस्तो कमेन्ट गरेका हुन्।
पाठक तान्ने उद्धेश्यले ब्लगस्पट साइटहरु बनाएर कसरी हुँदै नभएका कुरालाई खबरको रुप दिइन्छ भन्नेबारेको सामग्री त तपाईँले हेर्नुभएकै होला। अब तिनै हावा ब्लगस्पटको सिको गर्दै नाम चलेका समाचार पोर्टलले पनि घटना वा प्रसंगलाई बढाइचढाइ दिन थालेका छन्, त्यो पनि नेपालको ‘नेपालको नम्बर एक न्युज पोर्टलले। सत्य के हो पठकलाई पत्याउनै गाह्रो !
अनलाइनखबरको समाचारको हेडलाइन छ- ‘प्रधानसेनापतिका भाइको पेट्रोल पम्प’मा सिलबन्दी, सञ्चालक पक्राउ।
के छ समाचारमा?
अब समाचारमा के छ तपाईँलाई जानकारी दिउँ। वाणिज्य विभागले चितवनको भरतपुर १० रिजालचोकमा रहेको अष्टभुजा पेट्रोल पम्पमा सिलबन्दी गरेछ। विभागले पेट्रोलपम्प सञ्चालक खिलकान्त बर्तौलालाई कालोबजारीमा संलग्न रहेको पाएपछि नियन्त्रणमा लिएछ।
समाचार अनुसार ‘उक्त पेट्रोल पम्प नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका भाइ रविन्द्र क्षेत्रीको जग्गामा बनेको’ छ। समाचार भन्छ- बर्तौलाले भाडामा पेट्रोल पम्प चलाउँदै आएका थिए। हेडलाइन भन्छ- प्रधानसेनापतिका भाइको पेट्रोलपम्प, तर समाचार भन्छ- प्रधानसेनापतिका भाइको जग्गामा बनेको। बाझिएन त कुरा?
तर कुरा त्यतिमा मात्र कहाँ सकिन्छ र? हेडलाइन पुष्टि गर्न समाचारमा ‘स्थानीयले अष्टभुजा पेट्रोल पम्पलाई प्रधानसेनापतिको भाइको पेट्रोल पम्प भनेर चिन्ने गर्दछन्’ भनेर दाबी गरिएको छ।
स्थानीयले जे भन्छन् त्यसैको आधारमा समाचार बनाउने वा त्यसमा उनको लगानी छ कि छैन भनेर पत्रकारले पुष्टि गर्ने? भएन त अचम्म?
तर समाचार लेख्ने पत्रकारले मिहिनेत नै नगरेको चाहिँ होइन। उनले नेपाली सेनाका प्रवक्तासँग त्यसको पुष्टि गर्न खोजेका छन्। सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले प्रष्ट भनेका छन्- ‘व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। त्यसैअनुसार भाडामा दिएको हो। भाडामा लिनेले गलत काम गर्छ भने कस्को के लाग्छ र ?’
भनेपछि त्यो पेट्रोलपम्प प्रधानसेनापतिका भाइको रहेछ त?
ल मानौँ, हो रहेछ भने पुष्टि गर्न सक्न पर्‍यो, सैनिक प्रवक्तालाई गलत साबित गर्नुपर्‍यो। नत्र हेडलाइनमा एक थोक र समाचारमा अर्कोथोक किन? हेडलाइनमा उद्धरण चिन्ह राखेर उम्कन पाइन्छ र? यसैलाई भनिन्छ ‘पाठक तान्ने पत्रकारिता’।
अनलाइनखबरको समाचारमा आएका कमेन्ट पनि पढ्नुस्, पाठक मुर्ख त छैनन् नि ! कि कसो?
Tags fake news Online Journalism Online news portals Onlinekhabar
मधेसमा मिडिया र अधिकारकर्मीप्रति आक्रोश »
« कान्तिपुरमाथि अख्तियारको आक्रमण, कसले भुल्यो भूमिका? अख्तियारले वा कान्तिपुरले?